Michael Keating oo Amaanay Midnimada Shacabka Soomaaliyeed | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Michael Keating oo Amaanay Midnimada Shacabka Soomaaliyeed
Michael Keating oo Amaanay Midnimada Shacabka Soomaaliyeed
Muqdisho (SONNA) Ergayga gaarka ah ee Xoghayaha guud ee Qaramda Midoobay u qaabilsan arimaha Soomaaliya Michael Keating ayaa si weyn ugu amaanay Shacabka Soomaaliyeed, Madaxda dalka iyo Beesha Caalamka Gurmadka ay u sameeyeeyn dadkii waxyeelada ay ka soo gaartay qaraxii 14-kii bishan ka dhacay magaalada Muqdisho.
Michael Keating ayaa ku baaqay in Midnimadaas loo adeegsado Hormarinta dalka iyo Nolosha dadka Soomaaliyeed, isagoo sheegay in Soomaaliya ay hormar badan sameyneyso, wuxuuna isbarbar dhigay sanad ka hor sida ay aheyd Soomaaliya iyo hada isagoo sheegay Hormar iyo dhismo badan uu ka socdo Muqdisho, Jowhar iyo Magaalooyinka kale ee dalka.
Danjiraha ayaa sheegay in Beesha Caalamka ay labo jibaareyso Taageerada ay siiso Soomaaliya balse wuxuu xusay in Hormarka Soomaaliya looga baahan yahay Shacabka Soomaaliyeed markaas ka dibna ay taageero dhinac kasta ah la garab istaagi doonaan Beesha Caalamka, wuxuuna ku baaqay in Khilaafka lagu dhameeyo wada hadal.
Munaasabada Caleemasaarka Madaxweynaha Hirshabeelle ayaa masuuliyiintii khudbadaha ka jeediyay waxay ku baaqeen in laga shaqeeyo Midnimada iyo si wadajir ah loola dagaalamo Aragagaxisada Al shabaab oo cadow ku ah hormarka dalka.
Previous articleWasiirka Maaliyadda XFS oo kormeeray xarunta Canshuuraha Garoonka Muqdisho”Sawirro”
Next articleMadaxweynaha JFS iyo RW Itoobiya oo ka wada hadlay dabargoynta argagixisada Al Shabaab(sawirro)